Website ဆိုတာဟာ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်က | MWS-Myanmar Web Solution
Website ဆိုတာဟာ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်က ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ခွဲတစ်ခုပါပဲ
မိတ်ဆွေတို့ သိထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင် ဝန်ထမ်းလိုလာပါပြီ။ ဝန်ထမ်းကို လစာပေးခန့်ထားဖို့ တည်မြဲဖို့ လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်ကျေပွန်ဖို့ အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ ဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့ စသဖြင့် ဝန်ထမ်းအတွက်တွေးတော နေရတာတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ Website တစ်ခုသာဆို ဒီလိုတွေ တွေးရ စိတ်ညစ်ရမှာမျိုးတွေ မရှိပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေကမှ အလုပ်နားတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။ Website ကတော့ ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှာပါ။ ဝန်ထမ်းတွေသာ အလုပ်သစ်ပြောင်းချင် ပြောင်းသွားမယ်။ Website ကတော့ ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ အလုပ်ထွက်သွားတာ၊ အလုပ်မကြိုးစားလို့ အလုပ်ထုတ်လိုက်ရတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အချိန်ပြည့် သစ္စာရှိရှိ ကိုယ့်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေမှာပါ။
ဒီလိုပြောလို့လဲ ဝန်ထမ်းတွေ မလိုဘူးလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လိုပါတယ်။ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Website ဆိုတာဟာ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်က ဆိုင်ခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းမလိုတဲ့ ဆိုင်ခွဲတစ်ခုဖွင့်နိုင်ရင် မိတ်ဆွေအတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးများမလဲ ကိုယ်တိုင်သာတွေးကြည့်ပါတော့။
ဒါ့အပြင် ဒီနေ့လို Digital ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ Website တစ်ခု ရှိကိုရှိနေသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဖောက်သည်တွေက ကိုယ့်ကိုပိုမို လေးစားယုံကြည်လာကြမှာပါ။ လုပ်ငန်းကြီးတောင်လုပ်နေပြီး Website လေးတစ်ခုတောင် မရှိဘူးလားလို့ အပြောမခံပါနဲ့။
မိတ်ဆွေ သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် Website ရှိပြီလား။ Website တော့ ရှိချင်ပါရဲ့ ဘယ်ကနေစလို့ လုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော်များ Myanmar Web Solution ကနေပြီးတော့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေခင်ဗျာ….
ကျွန်တော်တို့ Myanmar Web Solution (MWS) မှ Max Myanmar Hotel Group – http://www.maxhotelsgroup.com , Bolt Myanmar Co., Ltd – http://www.boltnutri.com , i-connect Training Centre – http://www.iconnect-mm.com , FRD – http://www.frd.gov.mm , မြန်မာ့မီးရထား – http://myanmarailways.gov.mm စတဲ့ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက Websites တွေအပြင် အခြား Websites ပေါင်းများစွာကိုလဲ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Websites ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့….
+959254062180, +95 9799579761
webadmin Ads css3, html5
Newer Postလုပ်ငန်းအတွက် ထိရောက်တဲ့ကြော်ငြာ